Amin'ny fampiasana ny haitao (Field of Electromagnetic mifantoka mafy), amin'ny alàlan'ny fanentanana ny hozatra, ny hozatra autologous dia mitatra hatrany ary nifanarahana, ary misy fiofanana mahery vaika, mba hahafahana manavao ny hozatra lalina, izany hoe ny fitomboan'ny myofibril ( fanitarana ny hozatra) ary ny famokarana rojom-proteinina collagen vaovao sy tady hozatra (hyperplasia hozatra) hampiofana sy hampitombo ny hakitroky ny hozatra sy ny hamaroany.
Ny famerana ny hozatry ny haavo 100% amin'ny teknolojia HIFEM dia mety hiteraka lipolysis be dia be. Ny asidra matavy dia tapaka avy amin'ny asidra triglyceric ary manangona be dia be amin'ny sela matavy. Ny fifantohana asidra matavy be loatra dia mety hiteraka apoptosis ny sela matavy ary esorina amin'ny vatana amin'ny alàlan'ny metabolisma mahazatra ao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Noho izany, ny mpamorona dia afaka manamafy sy mampitombo ny hozatra ary mahatratra ny vokatry ny fihenan'ny tavy.
Mandritra izany fotoana izany, rehefa mampiasa ny mpamorona endrika, dia hatsaraina ny endrika ny kibony sy ny vodiny. Ny onja elektromagnetika dia miditra amin'ny sosona hozatra hatramin'ny 7cm, izay mitovy amin'ny fihenan'ny hozatra 20 000!
（hadisoana ao anatin'ny 20mm ）
Manangana hozatra ary mandoro tavy miaraka
Fanandratana ny valahana tsy manafika
Mety amin'ny rehetra-tsy misy fanatoranana-tsy fandidiana
Fitsaboana vetivety, indray mandeha 30 minitra
Fotoana 8 ihany no ilaina eo anelanelan'ny 2-3 andro
Mahatsiaro ho fanatanjahan-tena mafy
Milamina tsy misy fahatapahana
Tonga dia eo ny valiny, saingy ho tsikaritra izany aorian'ny roa na efatra herinandro.
Ny hozatra dia nitombo 16% teo ho eo
Salanisan'ny fahaverezan'ny tavy 19%
Masinina amin'ny fitsaboana
Namidinay vokatra marobe erak'izao tontolo izao. Ny orinasantsika dia mandray anjara amin'ny fampiratiana maro isan-taona, toa an'i Italia, Dubai, Espana, Malezia, Vietnam, India, Torkia ary Romania. Misy sary vitsivitsy etsy ambany:
Fonosinay ao anaty boaty vy mahazatra ny masinina, ary ampiasainay DHL, FedEx na TNT hanaterana ny masinina aminao isam-baravarana.
Teo aloha: 4 mitantana masinina fananganana hozatra magshape
Manaraka: Pinxel-2 Microneedle RF & Fractional RF masinina
Milina Hiemt miendrika vatana
Fanentanana hozatra elektrômanetika Hiemt
Masinina Hiemt Tesla Ems
Portable High Frequency testlasculpt Hi-Emt Body ...
Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Masinina mpanentana hozatra Ems, fanesorana ny holatra, Co2 Laser Laser miato, Laser estetika Co2, Shr Ipl Opt,